တစ်​ခုခု​တော့ တစ်​ခုခုပဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » တစ်​ခုခု​တော့ တစ်​ခုခုပဲ	6
Posted by naywoon ni on Aug 18, 2015 in Poetry |6comments
တစ်​ခုခု​တော့ တစ်​ခုခုပဲ ​စေတနာ ငါးစား​တွေနဲ့ ငါးမျှားတဲ့ည​နေ
လာ​နော်​ လာ ငါးက​လေး​ရေ
မင်းတို့ဖို့ တီ​ကောင်​​လေး​တွေ ။
ငါးတစ်​​ကောင်​မှ မမိဘူးအ​မေ ။
တစ်​ခုခု​တော့ တစ်​ခုခုပဲ​လေ ။ ​နေ၀န်းနီ
အောင် မိုးသူ says: တစ်ခုခုတော့ တစ်ခုခုပဲ
black chaw says: ငါးတွေက လျှင်လွန်းတာ လား
ခင်ဗျား ကပဲ ကံမကောင်းတာလား
အဲဒီ အထဲက တစ်ခုခု ဖြစ်မယ်ဗျ…။
မြစပဲရိုး says: ငါးလေး တွေ က တီကောင် လေး တွေ ကို တော့ ရအောင် စားသွားနိုင်တယ်လား။
သေချာပါတယ်။ တီကောင်လေး တွေ ကို က တုံးတာပါ အဘနီ ရယ်။
Alinsett @ Maung Thura says: တစ်ခုခုကို တော့ ရင်…နှစ်ခု ဖြစ်သွားရမှာ…
အားပြင်းပြင်းလေး တော့ ပေါ့…
aye.kk says: လျှင်လွန်းတဲ့ငါးနဲ့
Mike says: .ငါးမမိသေးဘူး….ငါးမမိသေးဘူး…မန်းလေးကျုံးေ၇မခမ်းသမျှတော့…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.